Blackout Sunetex Ndị na-emepụta & Ndị Na - eweta Ya - China Blackout Sunetex Factory
High-Quality Blackout ala na-ekpuchi ákwà
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric bụ nke 100% polyester nwere ogo dị elu na ezigbo agwa. Anyị nwere ike ịnye 200/230/250/300 cm obosara dị iche iche maka windo gị, na ogologo ọkọlọtọ bụ 40 mita kwa mpịakọta. High polyester fabric na-eme ka anyị akwa 'ike bụ 4 ugboro elu karịa naịlọn na ugboro 20 elu karịa viscose; Ezi agbanwe na-eme ka ngwaahịa anyị sie ike, na-adịgide adịgide, na-eguzogide ọgwụ. E wezụga nke ahụ, akwa polyester anyị nwere nnukwu mgbochi okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi. Ha abụghị ebu, enweghị nla, enweghị nrụrụ, ọ dịghị mgbape mgbe ojiji oge.
Na a ihu abụọ agba gluu usoro, nke na-eme ya nwere ezi mmetụta na-edebe si ìhè. Fabricdị anyị bụ mgbochi ọkụ na mmiri na-enweghị mmiri, ọ nwere ike ịgafe NFPA701（USA）asambodo, na agba ngwa ngwa ma ọ bụrụ na Ọkwa 4.5. High-quality raw polyester material na-eme ka akwa anyị bụrụ ndị ama ama n'etiti ndị ahịa anyị. Ọ dị mma maka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, na ụlọ. Anyị nwere ike ịnye gị ihe nlele n'efu!
High-Quality ala Blinds Fabric Polyester Blackout
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Emere ya nke 100% polyester. Ihe ọ bụla nwere ọdịdị dị mma, ọ mara mma, na-emesapụ aka, na okomoko. Anyị nwere ike ịnye 200/230/300 obosara dị iche iche ka ịhọrọ site na. Ibu ibu nke akwa anyị bụ 360gsm kwa mita. Na agba gluu na ụfụfụ na-acha ọcha usoro, anyị blackout ákwà nwere elu mma. Anyị nwere ihe karịrị 10 ejiji na agba gị. Anyị nwere ụdị dị iche iche maka nhọrọ gị, ị nwere ike ịhọrọ onye ọ bụla.
Fabricdị anyị bụ mgbochi ọkụ na mmiri na-enweghị mmiri, ọ nwere ike ịgafe NFPA701（USA）asambodo, na agba ngwa ngwa ma ọ bụrụ na Ọkwa 4.5, nke na-eme ka ọ nwee nnukwu aha n'etiti ndị ahịa anyị. Ọ''dị nnọọ mma maka ụlọ akwụkwọ, ụlọ, na ọfịs. Kedu'Ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnye gị nnwale n'efu!
Ime ụlọ Window Blinds Blackout Fabric For Office
Sunetex Indoor Window Blinds Blackout Fabric For Office bụ nke polyester nwere ezigbo mma. Ọ na-adịgide adịgide, enweghị ebu na nla. Anyị nwere ọtụtụ ụdị nke oge gboo agba maka nhọrọ gị. Ihe ọ bụla nwere ọdịdị dị mma, ọ mara mma, na-emesapụ aka na okomoko. Anyị akwa bụ waterproof na ọkụ mgbochi.Adopted na gburugburu ebe obibi enyi na enyi akwa, na-abụghị na-egbu egbu na keenweghiuto nke na-eme ka a ala gburugburu gị. Mee ka ndị ahịa anyị nwee udo nke uche mgbe ị na-eji ngwaahịa anyị.
Sunetex Jacquard Roller Blinds Fabric Blackout Series ngwaahịa sitere na 100% polyester nwere oke mma. Anyị na-enye akwa jacquard na ụzọ mkpuchi dị iche iche. Ugboro abụọ ihu itinye-mkpuchi usoro nwere ike ime ka ọkara blackout akwa, ụfụfụ ọcha mkpuchi usoro nwere ike ime ka blackout akwa. Ngwaahịa anyị dabara adaba maka ụlọ akwụkwọ, ọfịs na ụlọ. Nabata ozi gị!
Sunetex Jacquard Roller Blinds Fabric nwere ezigbo aha n’etiti ndị ahịa anyị. Anyị nwere ọtụtụ ụdị akwa maka nhọrọ gị, ihe ọ bụla nwere ọmarịcha mma, ọ mara mma, na-emesapụ aka, yana okomoko. Anyị nwere ezigbo ndị otu maka ị nwere ike ịnye gị ezigbo ọrụ, anyị lekwasịrị anya na ezigbo ọrụ ahụmịhe onye ọ bụla ma gbalịa ịme ikuku dị ọkụ. N'ihi na anyị mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike na-enye gị free samples ịlele àgwà na agba.
Oge a cochọ Mma ala Blind Fabric Blackout
Sunetex Modern Decoration Roller Blind Fabric Blackout bụ nke polyester. Mkpuchi ụcha ụfụfụfụfụ na-eme ka ọ bụghị naanị agbanyụ ọkụ, kamakwa ejiji. Anyị na-akpa bụ mmanụ-àmà na waterproof, ọ dị mfe ọcha, akọrọ ozugbo ụlọ akwụkwọ ji agwụ. Ọkọlọtọ obosara bụ 200cm na 230cm. Ọkọlọtọ aro bụ 330gsm kwa square mita. Ma o nwere ezigbo ikike inyogwe ma nwee ezigbo mmetuta ikuku. Anyị nwere agba dị iche iche maka nhọrọ gị.
Sunetex Modern Decoration Roller Blind Fabric Blackout na-enwe ọmarịcha ịzụrụ ahịa na ndị ahịa anyị. Na akwa mma akwa, ọ na-adịgide adịgide na ndụ ya niile nwere ike ịbụ afọ iri. Anyị bụ ndị nrụpụta, anyị na-ere ndị ahịa anyị ngwaahịa ozugbo, ọ nwere ike inyere gị aka ịhapụ mmefu ndị ọzọ. N'ihi na nke mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike na-enye free samples gị.
New Design ala Blind Fabric Blackout
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric bụ nke 100% polyester nwere ogo dị elu na ezigbo agwa. N'iji mkpuchi mkpuchi agba agba ihu abụọ, na-eme ka ọ nwee mmetụta dị mma na ịhapụ mkpuchi nzuzo na nzuzo nzuzo. Ihe polyester dị mma nwere ike ime ka ọ dịgide, enweghị ebu, enweghị nla, enweghị nrụrụ, enweghị egwu mgbe eji ogologo oge.
Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta ihe na ìsì maka ihe karịrị afọ 16. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịbụ a ga-adaba adaba otu nkwụsị zụọ maka ndị ahịa anyị. Nzube anyị na-enye ndị ahịa zuru oke akwa. Anyị nwere ike na-enye free samples gị nke mbụ imekọ ihe ọnụ.
SuneTex Roller Blinds Fabric bụ otu n'ime ngwaahịa ahịa anyị na-ere ọkụ. Emere ya nke polyester nwere ogo di elu na ọnụ ahịa ezi uche di na ya. Ha na-adịgide adịgide, ndụ ha nwere ike ịbụ afọ iri. Na ezi mma na kacha mma ọrụ, anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Anyị na-enye ọrụ 24hours maka ndị ahịa anyị iji kwado gị.
Na usoro mkpuchi mmịnye, nke na-eme ka ọ nwee mmetụta dị mma na ikuku na ọkụ. O nwere ike inyere gị aka ịchekwa ike. Ọ dị mma maka ụlọ akwụkwọ, ụlọ na ọfịs. Anyị bụ ndị mbụ factory ọkọnọ, ma ọ bụrụ na ị na-akwado anyị, ị nwere ike max oke. N'ihi na nke mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike na-enye free samples gị!
Sunetex Roller Blind Blackout Curtain Fabric bụ nke 100% polyester dị mma. Site na iji akwa ihe eji eme ihe, ọ na-eme akwa anyị na ike dị elu. Anyị na-enye akwa jacquard na ụzọ mkpuchi dị iche iche. Na ultrasonic ọnwụ technology, nke na-eme ka anyị na-akpa ákwà mma. Anyị nwere ọtụtụ ụdị akwa maka nhọrọ gị, ihe ọ bụla nwere ọmarịcha mma, ọ mara mma, na-emesapụ aka na okomoko.
Anyị nwere nlezianya mma njikwa maka ngwaahịa anyị. Ngwaahịa anyị niile dị mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Ndị otu anyị na-enye gị ọrụ kachasị mma 24. Anyị na-elekwasị anya na ahụmịhe ọrụ dị mma nke ndị ahịa ọ bụla ma gbalịa ịmepụta ikuku na-ekpo ọkụ. Anyị nwere ike ịnye gị nnwale n'efu!
Ala Roll Blackout Fabric 100% polyester
Sunetex Roller Blind Fabric bụ nke 100% polyester nwere oke mma. Standardkpụrụ ọkọlọtọ bụ 160 g kwa square mita. Na mkpuchi ihu ihu abụọ, akwa anyị bụ agbanyụ ọkụ. Anyị nwere ụdị akwa dị iche iche maka nhọrọ gị. Ihe ọ bụla nwere ọmarịcha mma, ha mara mma, na-emesapụ aka na okomoko. Anakwere na gburugburu ebe obibi enyi na enyi akwa, na-abụghị egbu egbu na keenweghiuto nke na-eme ka a ala gburugburu gị.
Ngwaahịa anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Na ọ nwere ike inyere gị aka a controllable ìhè, adabako ọkụ mmetụta maka ime ụlọ, shading na okpomọkụ akara, na ultraviolet nchebe. Anyị nwere obere MOQ, ọ bụrụ na iwu gị buru ibu, anyị ga-eme ndokwa maka gị, ma ọ bụrụ na iwu gị pere mpe, echegbula onwe anyị, anyị nwere ngwaahịa maka ngwaahịa ere ọkụ. Anyị nwere ike ịnye gị nnwale n'efu ka ịlele ogo na agba.
Ala Blinds Blackout Fabric Polyester
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric bụ nke polyester nwere ogo dị elu na agwa ọma. Ngwaahịa anyị dị mma, ọ dị mma, enweghị ebu na nla. Anyị nwere agba gboo ọcha na agba ntụ maka nhọrọ gị. Ihe ọ bụla nwere ọdịdị dị mma, ọ mara mma, na-emesapụ aka na okomoko.
Na usoro mkpuchi ihu ihu abụọ nke na-eme ya, Sunetex Slubby Yarn Fabric bụ otu n'ime ngwaahịa ọnụahịa dị elu anyị. Ọ nwere ike inyere gị aka ịhazigharị ime ụlọ, nye gị ebe ka mma. Anyị na-enye afọ 10 akwụkwọ ikike niile anyị na akwa. Na ezi mma na kacha mma ọrụ, anyị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa anyị. Dị ka nke mbụ imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike na-enye free samples gị.
Slubby Yarn Blind Fabric Foam White mkpuchi
Sunetex Slubby Yarn Blind Fabric bụ nke polyester blackout akwa nwere oke mma. Na ụfụfụ na-acha ọcha ụfụfụ, na-eme ka uwe ojii. Igwe ndị dị elu na teknụzụ na-eme ka ọ belata. Anyị nwere agba dị iche iche dị iche iche, ị nwere ike dakọtara agba ọ bụla masịrị gị. Anyị nwere ike ịnye 200/230/250/300 cm obosara dị iche iche maka windo gị, ogologo ọkọlọtọ bụ 40 mita kwa mpịakọta. Anyị nwere ụdị akwa dị iche iche maka nhọrọ gị, ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla.
Anakwere na gburugburu ebe obibi enyi na enyi akwa, na-abụghị egbu egbu na keenweghiuto nke na-eme ka a ala gburugburu gị. Mee ka ndị ahịa anyị nwee udo nke uche mgbe ị na-eji ngwaahịa anyị. Ebumnuche anyị bụ ịnye ndị ahịa anyị ihe mkpuchi kacha dabara adaba maka mkpa windo ndị ahịa. Anyị nwere ike ịnye gị ụzọ kacha mma ejiji. Anyị nwere ike inye ndu ntuziaka maka ndị ahịa n'ụwa niile.
Elu Plain Blind Fabric Blackout
Sunetex Superior Plain Blind Fabric bụ nke 100% polyester nwere oke ike. Ọ nwere ezigbo ikike iji na shading. Ọ nwere ike ịchacha ụzarị ultraviolet, mee ka ọfịs gị nwee ọrụ ọfụma. O nwekwara ezigbo mmetụta ventilashion. Na usoro mkpuchi ọlaọcha, ọ na-atọ ụtọ ma na-ebuli elu. Ngwaahịa anyị siri ike ma sie ike. Anyị nwere ike ịnye 200/230/250/300 cm obosara dị iche iche maka windo gị, na ogologo ọkọlọtọ bụ 40 mita kwa mpịakọta. Anyị nwere agba dị iche iche maka nhọrọ gị.
Anyị bụ ndị ọkachamara na-emepụta ihe na ìsì maka ihe karịrị afọ 16. Anyị na-ere ákwà na ngwa mkpuchi. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịbụ a ga-adaba adaba otu nkwụsị zụọ maka ndị ahịa anyị. Iji mee ka ndụ gị ka mma, anyị na-agbalị kasị mma anyị na-enye gị zuru okè blinds akwa. Anyị nwere ike na-enye free samples gị nke mbụ imekọ ihe ọnụ.